Siyaasi Cabdiqaadir Obsiiye Oo Sheegay In La Gaadhay Wakhtigii Shacabka Somaliland Is Baddal Samayn Lahaayeen | Saxil News Network
Siyaasi Cabdiqaadir Obsiiye Oo Sheegay In La Gaadhay Wakhtigii Shacabka Somaliland Is Baddal Samayn Lahaayeen
Hargaysa (Saxilnews.com)-Xisbiyadana Aanu Ka Dhex Muuqdan Hogaamiyihii Umaddan Badbaadin Lahaa
Hargeysa (HWN)- Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka) oo ka mid ah siyaasiyiinta inta badan aadka uga hadla Arrimaha Bulshada iyo guud ahaan danta qaranka iyo daryeelka Bulshada ayaa dalka ku soo laabtay kadib safar oo muddo ugu maqnaa dalal ku yaalla qaaradda Asia isaga oo sheegay in markii uu dalka ku soo laabtay uu arkayo in xaaladda dalku ka sii dartay oo ay bulshadu dhibaato weyn ku qabto dhibaatooyinka bulsho ee marka horeba haystay oo ay ka mid tahay sicir bararka, qiimo dhaca shilinka Somaliland, musuqmaasuq iyo maamul xumada dalka ku baahday waxaanu Bulshada reer Somaliland ugu baaqay in ay masiirkooda ka taliyaan oo iyagu keensadaan is
baddalka dalkan iyo dadkani u baahan yahay isaga oo dhinaca kalena dhaliilay in aanay xisbiyada qaranka ka dhex muuqda dadkii umaddan badbaadin lahaa balse sheegay in loo baahan yahay in umaddu fadhiga ka kacdo oo ay is baddal nololeed keensadaan iyagu maadaama aanay cidina u naxayn isaga oo dhinaca kalena baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanada Gobolka Sanaag.Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye oo ku magac dheer Madaxweynaha Mustaqalku waxa uu arrimahan iyo kuwo kaleba kaga hadlay mar uu la hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta waxaana uu isaga oo arrimahaa ka hadlaya yidhi: “Ugu Horrayn waxaan baaq nabadeed u dirayaa beelaha walaalaha ah ee ku diriray deegaanada Gobolka Sanaag, waxaanan leeyahay walaalayaal waa in aynu ka gudubnaa colaaddan soo noqnoqotay waxaana la joogaa wakhtigii aan la kori lahayn colaadda dadkeena walaalaha ah. Qabyaaladda iyo colaaddu waa waxa aynu ka dhaqaaqi la’ nahay 70-ka sannadood inta ka badan ee halkaa ina dhigay, waxaanan ku baaqayaa in dadkeenaa walaalaha ah ee dagaalamaya caqligu shaqeeyo. Dad wax garadka ahi ha shaqeeyo oo haloo soo jeedsado sidii dalkan nolol wanaagsan looga abuuri lahaa. Hana la joojiyo dhiigga daadanaya. Dhagaheenu way ka daaleen colaad iyo dhibaato”.
Dhinaca kale Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye oo xaaladda dalka ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Mudadii aan dalka ka maqnaa waxa aan dareemayaa in ay ku sii korodhay xaaladda qalafsan ee dalkani ku jiro. Dhibaato badan ayaa dadkeenii maanta haysata. Waxa muuqata in waddankii wax ka sii dhaca mooyee aanay jirin wax u soo kordhayaa. Sicir-bararkii ayaa sii laban laabmay. Musuqii oo xadhkaha sii goostay. Caddaalad darradii oo ka sii dartay. Waxyaabihii aan hore inta badan uga hadli jirtay ayaa sii laban laabmay oo dalkii aafeeyey iyada oo aanay cidina waxba ka qaban cid dheg jalaq u siinaysaana aanay jirin. Dadkii jilcdasanaana lagu sii tumanayo oo aanay jirin cid u tudhaysa oo wax u qabanaysa ama ka damqanaysaa. Xukuumadda haddii ay tahay iyo golayaasha kaleba waxaan arkayaa in ay ku sii jeedaan wixii dib u dhaca innagu keenay oo ah qabyaalad. Waa in aynu u soo jeedsanaa horumar iyo wax qabsi ee aynaan dib ugu noqon waxa maanta halkaa inna dhigay. Xukuumadda iyo golayaasha waxaan u soo jeedinayaa in aanay umadda kabaha la dul marin oo ay ku sii tuman, waxaana iman doona wakhti nabsigu dillaaco oo umaddu kacdo oo wax qabsato. Maanta dadku waxa ay u baahan yihiin hogaamiye wanaagsan oo diin iyo dadnimo leh oo umaddan meel wanaagsan gaadhsiiya. Dadkii ku baraarugsanaan lahaa arrinkaasi in kabaha lala dul maro mooyee waxba kale ma jiraan dadkiina dantii ayaa u dan sheegtay. Umaddeenu waa dad wanaagsan oo muddo badan aamusnayd balse maanta sida fulkaanaha ayay u qarxayaan oo waxa ay dalban doonaan cidda ay doonayaan in ay hogaamiyaan. Waynu arkaynaa dadkii iyada oo maanta doorasho la hadal hayo ayay dadkii ku leeyihiin yaanu dooranaa oo ay niyad jabsan yihiin. waxa ay ka niyad jabeen cid ay doortaan oo hagaagsan ayaan jirin qabyaalad iyo qudhun baa umaddii lagu dawakhiyey”.
“Umadda waxaan leeyahay waar fadhiga ka kaca oo dantiina qabsada oo dalkiina is baddal ka sameeya si aad nolol wanaagsan u gaadhaan. Waad arkaysaan in asxaabteenii aanay jirin cid danta ka shaqaynaysaa oo ay iyagii isku muuqdaan oo hebel hebel u jawaab iyo qabyaalad ku mashquulsan yihiin. Dalka haloo tudho oo umadda haloo tudho. Waxa la gaadhay wakhtigii dadkani baraarugi lahaayeen. Waad arkaysaan dadku sida ay doorashada uga niyad jabsan yihiin ee aanay dan uga lahayn waayo way niyadjabeen oo waxa ay naceen siyaasadda iyo siyaasiga maanta. shacabka ayuu ku dhex jiraa qofkii wanaagsanaa ee waa in ay keenaan ilaahayna qalbiga ha u hagaajiyo. Wali dadku ma dareensana in ay iyagu dawlad yihiin oo cid kale ayay dawlad u arkaan. Xukuumaddanu waxa ay is leedahay wakhti idiinma hadhin ee ka sii gaadhsiiya. Waar wakhti baa iman doona oo maantaba taagan oo ah in ay dadku kacayaan oo ay muujin doonaan cududooda. Haddii aanay dadku kicin cid u soo socota oo wax u qabanaysaa ma jirto. Waxaan leeyahay waar dadka wax haloo hambeeyo. Wakhtigi ma dhammaanin wax badan baa hadhay oo waa la xisaabtami doonaa oo umaddani way arkaysaa ka lugoynaya iyo kan wax u qaban doona. Halaga baxo, yooyootankan iyo qabyaaladdan”. Ayuu hadalkiisa ku soo gunaanaday siyaasi Cabdiqaadir Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalku).
Madaxweynaha Mustaqbalka ayaa inta badan bulshada kala hadla halka ay dantoodu ku jirto isaga oo walaac badan ka muujiyey xaaladda wakhtigan dalku ku sugan yahay isagoo oo umadda ugu baaqay in aanay cidina u maqnayn ceelna u qodnayn ee ay iyagu wax qabsadaan oo fadhiga ka kacaan.